Dalal ay Soomaaliya ku jirto oo loogu deeqday Malaayiin doollar ah, Maxaase lagu qaban doonaa? | HalQaran.com
Home Wararka Maanta Dalal ay Soomaaliya ku jirto oo loogu deeqday Malaayiin doollar ah, Maxaase...
Dalal ay Soomaaliya ku jirto oo loogu deeqday Malaayiin doollar ah, Maxaase lagu qaban doonaa?
Muqdisho (Halqaran.com) – Dowladda Holand ayaa ku dhawaaqday in ay lacag dhan 28 milyan oo Doollar ugu deeqday dalalka Soomaaliya, Suudaan iyo Koofurta Suudaan.
Lacagtan ayay Holand sheegtay in ay ku taageereyso dhanka gargaarka cunnooyinka dalalka muddada dheer la daalaa dhacayay dhibaatooyinka kala duwan.
Deeqdan ay bixinayso Holand ayaa timi kaddib heshiis ay wada sixiixdeen Wasiirka Ganacsiga Holand Sigrid A.M. Kaag, iyo Agaasimaha Guud ee Hay’adda Beeraha iyo Cunnada Adduunka Qu Dongyu oo ku sugan New Yorka kana qeyb galaya shirka Golaha Guud ee Qaramada Midoobay.
Agaasimaha FAO ayaa sheegay in dalalka ay haleeleen musiibooyinka kala geddisan ay mar walba yihiin dalal ku tiirsan deeqaha gargaarka ah ee la gaarsiiyo, maadaama ay adagtahay in ay horumar wanaagsan ka sameeyaan dhanka wax soo saarka beeraha.
Mudane Qu ayaa tilmaamay in arrintani tahay tallaabo loo qaaday dhanka dadaallada ku tiirsan iskaashiga ee gacanta ka geysanaya yareynta dhibaatooyinka ay macaluushu ka mid tahay ee ay sababaan qalalaasaha ka jira dalalka qaar.
Hay’adda FAO ayaa ah hay’ad u taagan ka jawaabidda baahiyaha iyo gargaarka aadane ee ay fidiso Qaramada Midoobay taasoo daboosha kaliya saddex dalool hal dalool baahiyaha ka taagan dacallada dunida.
Soomaaliya ayaa nasiib u heshay in ay ka mid noqoto dalalka ka faa’iideysanaya deeqdan ay bixinayso dowladda Holand, taas oo la rajaynayo in wax looga qabto dhanka cunnooyinka gargaarka ah ee ay helaan dadka ku tabaaloobay colaadaha iyo abaaraha is xig xigay ee dalka ka dhacay.
dalal ay Soomaaliya ku jirto
malaayiin dollar ugu deeqday